Eyona jelly Bean rom ilungileyo kwi-Samsung Galaxy S GT-I9000 | I-Androidsis
Kule mihla, ndizinikezele zama zonke iirom zeJelly Bean ezikhutshelwe i-Samsung Galaxy S, kwaye ndinokuxelela, ndisazi ukuba ndithetha ngantoni, yile Elona zibuko libalaseleyo ndidibene nalo kodwa ngomahluko omkhulu.
I-rom eyenziwe liqela Iqela le-Android Jelly Bean Yeyona nto intle eyenzekileyo namhlanje kum Samsung Galaxy S, Sele zikwinguqulelo yazo v6 kwaye ibonisa kwinkqubela phambili abayenzileyo.
Enye yezinto eye yandothusa kakhulu kukuba banikezele okanye ulwahlulo lwedatha olucinyiweyo, Isahlulelo esilahlekileyo esisinike ingxaki enkulu kwi CyanogenMod 9 Kwaye kwafuneka kulungiswe ukulungiswa, kuba yayigcwalisiwe kungekudala ngedatha yezicelo zethu ezifakiweyo, ezathi zakuphelelwa yindawo zaqala ukunyanzela ukuvalwa kwesicelo.
Eyona nto inomtsalane kukuba nkqu nokuhambisa idatha yesicelo kwisahlulelo idata, i-rom ayihambi iyacotha okanye inayo nayiphi na ibug okanye lag.
Ukuba ufuna ukuhlala amava Ijelly Bean kwi-Samsung Galaxy S yakho, ngendlela endilisekileyo kwaye ngokulula, ungathandabuzi ukuyifaka leyo ngokwemiqathango yam, kunye novavanyo olwenziwe kwisiphelo sam, yeyona ilungileyo yeJelly Bean rom yomzuzu we-Samsung Galaxy S.
1 Iimfuneko zokufaka le rom
3 Ukufaka i-TAJB v6 rom
Iimfuno zokufaka le rom ziyafana njengesiqhelo:
Ngaba i-terminal igxiliwe kunye nayo Ukubuyiselwa kweClockWorkMod ifakiwe.
Ibhetri igcwaliswe ngokupheleleyo.
Ngaba ukususa iibhagi kwi-USB yenziwe yasebenza kwimenyu yesethingi yesixhobo.
Ukufakela le rom siya kuyidinga Khuphela iifayile ezimbini ezixineneyo, enye ne-rom kunye enye ne-supersu fix.
Nje ukuba zombini iifayile zikhutshelwe, siya kuzikopa ngaphandle kokudakumba, ngqo kwi ingcambu yenkumbulo yangaphakathi kwesixhobo, emva koko siza kucima i-terminal kwaye siyiqale kwakhona kwimowudi yokubuyisela.
Ukufaka i-TAJB v6 rom
Siphinda sosule amanyathelo amathathu okuqala kwakhona
Phambili kwaye ukhethe ukulungisa iimvume.
Nje ukuba iqale kwakhona, siya kuyishiya ngaphandle kokumisela nantoni na kangangemizuzu emihlanu ukuze i-rom entsha isandula ukufakwa, emva kwelo xesha lifanelekileyo, ngaphandle kokumisela nantoni na okwangoku, siya kucima i-terminal kwaye siyivule kwakhona kwimowudi yokubuyisela fakela ukulungiswa kwesupersu:
Sikhetha i-zip yesupersu fix kwaye siqinisekisa ukufakwa kwayo.
Phambili kwaye ukhethe ukulungisa iimvume
Ngoku ulinde ukuba iqale kwakhona, kwaye uya kuba nakho ukumisela iiakhawunti zakho kwaye ubuyisele usetyenziso lwakho.
Khuphela-iRom TAJB v6, lungisa supersu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Iqela le-Android Jelly Bean ye-Samsung Galaxy S
Izimvo ezi-118, shiya ezakho
ITxurrispo Atiqueteimporta sitsho
Ingcono kakhulu kuneqela le-Elite leJelly Bean?
Phendula Txurrispo Atiqueteimporta
Molo, ndifake nje i-JW4 rom kulandela isifundo sakho esihle. Ndingayifaka i-jelly bean kule rom?
Ndingayenza ufakelo olucocekileyo oluvela kwi-JVU, ngaphezulu kwayo nayiphi na into yokuqinisekisa ukuba i-rom isebenza ngokufanelekileyo.
Kwibhlog kukho isifundo malunga nendlela yokufaka i-rom ngendlela ecocekileyo.
Isebenza kwi-samsung S GT I9000
Isebenza kwi-samsung S GT I9000 ???????
Andibhaqi uthungelwano lweefowuni eziphathwayo. Ngaba unazo naziphi na izimvo? Ndimtsha koku. Ndiyabulela kwangoko
Kuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo, kungafuneka utshintshe imodem.
Ndikucebisa ukuba ufake iTsunami X2.0 yamva nje onokuyifumana kwibhlog, kuba iphelelwe lixesha.
Ungcono kakhulu kuneJelly Bean kwiqela le-Elite?
Kwincasa yam, ukuba, ukongeza ekusebenzeni kwayo, ukucima ulwahlulo lwedatha, ndicinga ukuba licebo elihle kakhulu.
Kwaye malunga nokusetyenziswa kwebhetri oku kubhetele kakhulu kune-Elite.
Molo molo, ndifake nje i-rom kodwa xa ndiqala kwakhona ukufaka ukulungiswa kwe-supersu andinayo inketho yokuqalisa kwakhona, cima nje. Ngaba ikhona indlela yokuqalisa kwakhona kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo? Kubonakala ngathi ndilahlekile ...
Kulungile, ndikwazile ukuqala kwakhona kwifowuni icinyiwe, kodwa emva koko andiboni khetho lokuqalisa kwakhona naphi na, kukho ukucima kuphela.
Ewe, ndiyaqhubeka nokuvavanya ezinye izinto.
Kulungile, ukuba ujonga inqaku, kuya kufuneka uphinde uyiqale kwakhona imowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, njengakwi-TAJB rom olo khetho aluzukucofa Amandla, siya kuyenza ngesandla sisebenzisa indibaniselwano eyaziwayo yamaqhosha.
Kanye kwiXesha ekuPhulukenwe nalo, ukulungiswa kufakwe njenge-rom, emva koko uye uyokulungisa iimvume kwaye ekugqibeleni uqalise inkqubo kwakhona ngoku.
Ewe ndilifundile inqaku ukusuka kwiphepha ukuya kwiphepha, kodwa kuba ndiqhele ukubuyela kwimeko yesiqhelo ngokuqalisa kwakhona (ndivela kwi-CM9 ebusuku) indiphose kancinci.
Sele ndijikeleza irom. Inye into endothusayo kukuba zimbalwa iindlela onokukhetha kuzo kuseto, akukho macandelo alahlekileyo? Umzekelo, ukumiselwa kwebar yesaziso.
Umbuliso kunye nombulelo ngempendulo.
Gcina ukhumbula ukuba le Jelly Bean ye-Samsung Galaxy S iqalile nje kwaye iluhlaza, kuba ngoku bakwazile ukwenza yonke into ukuba isebenze, kwaye oko kuyanconywa, kancinci kancinci baya kuphumeza ukuphuculwa, kodwa okwangoku kufuneka Yima.
Njengoko izinto ezintsha ziphuma ndiza kwabelana nawe, ke yiya kwibhlog yakho amaxesha ngamaxesha.
Molo, ndivela kwenye i-JB ROM, ngakumbi eyona ivela kwi-derteufel1980, ekubuyisweni kwe-DevliRecovery kubonakala (ndicinga ukuba ngenxa yeKernel), uxolo ngenxa yokungazi kwam, ndingayifaka le ROM?
Ngokuqinisekileyo unako, ke qiniseka ukuba ulandela imiyalelo yokufaka ileta, ngakumbi iimvume zokulungisa.
yintoni ukulungiswa kwesuperusu, yenzelwe ntoni?
omnye umbuzo kuba le rom phantse 300mg? ezinye zinelungelo elincinci kakhulu?
Ukulungiswa kusetyenziselwa ukusombulula ingxaki ngeengcambu okanye ngeemvume zabangaphezulu, kwaye mega-megas into endicinga ukuba iya kuba yeyazo zonke iiapps eziza kumgangatho, nangona ndingakhathali kakhulu, eyona nto ibalulekileyo kukuba kokukhona ndiyisebenzisa ngcono ihamba, hayi ibug enye okanye ukuxhonywa kwezicelo.
Enkosi ngokuphendula ngokukhawuleza kwimibuzo. Into ye-megas yayilula ukwazi kuba umahluko wawungaqhelekanga kum.
Ewe, ndiza kuzama i-rom ukubona ukuba ihamba njani kwi-sgs zam, sele ndifuna ukujonga iindaba kunye nokuphuculwa kwembotyi yejeli. Umbuliso
Molo zinjani izinto? Ndifakile iROM kwaye phantse yonke into ilungile, kodwa andikwazi ukwenza okanye ukufumana iifowuni! Phambi koku bendenze i-flash ukuba iye ku-2.3.6 kunye neCFRoot ezikwiposi kweli phepha kwaye yonke into yahamba kakuhle. Ngaba unayo nayiphi na ingcamango endinokuyilungisa? Ukubulisa
Molo mhlobo wam, ndivela ePeru, enkosi kakhulu ngokufaka izinto ezinje ngezi, qhubeka njalo, uluntu luyabulela kuwe,… ndiyigqibile yonke le nkqubo, ndigqibelele, ndinombuzo omnye kuphela, ndiyathemba ukuba ndincede.
Wenza njani ukuze kwibar yesaziso ubonakale uvula kwaye ungasebenzisi i-wifi, ibluetooth, i-gps, njl. niyabulisa.
Molo mhlobo, iapps ibizwa ngokuba ziiMandla zokuLawula, isimahla emarikeni. Ndiyathemba ukunceda. Ukubulisa.
Ewe amandla olawulo lomhlobo.
Ibha yi-app kwaye njengoko i-compi ikuxelele ukuba ibizwa ngokuba yiMandla olawulo, ngokubhekisele kwirediyo ye-fm, akukho fm radio yee-roms okanye i-ICS okanye iJelly Bean, isicelo nje esenza imisebenzi yerediyo yoqobo ebizwa Umoya, nangona ndingacebisi. kuba zingaphezu kwesinye isithethi esele zilayishiwe.
Enkosi mhlobo, ikhangeleka intle, ingcebiso yomntu oyifaka okokuqala. I-kernel itshintshile, ke ihleli kwiscreen sokulayisha. Yenza izosula kwaye ufake kwakhona i-rom. Into endiyiqapheleyo kukuba ilazier encinci kunaleyo
derteufel1980, kodwa yonke into iyasebenza. Mhlawumbi kufuneka izinze. Ngendlela, ukuvuyisana nebhlog.
Nika ixesha lokuzinzisa kwaye uza kulibona eli qhekeza le-rom, kananjalo akufuneki ukhathazeke malunga nokwahlulahlulwa kwedatha, kuba ayisenayo.
URicardo Ventura sitsho
Khange ube nazingxaki nge-APN? Andikwazi ukuyila (ndivela kwaPepephone) kwaye ndiyile kwaye ndiyigcine, kodwa ayiveli kuluhlu, ndiyayiphinda, ndiyigcina kwaye ayiveli, kwaye ngaphandle kwedatha yokuvalelisa.
Kokunye, kuyabukeka kakhulu, ndicinga ukuba ukususwa kwedatha kuyimpumelelo, kwilixa elingaphambili ibine-4.0.4 kwaye nganye nge-3 ibingenandawo
Phendula uRicardo Ventura
Ngaba ukwazile ukumisela i-APN? Ndiyayakha, ndiyigcine kwaye ayikabonakali kuluhlu, ndiza kuyenza kwakhona kwaye akukho nto
beka imowudi yokubhabha, linda imizuzwana emi-5, wenze imowudi yokubhabha ibuye, kwaye ubuye, zonke ii-APNS sele zibonakala
Ngokuphumelelayo njengale okanye ngokuqalisa kwakhona ikhompyutha
Ukuqala kwakhona sele ndizamile amatyeli aliqela kwaye akukho nto, ndiyayitsho xa kwenzekile komnye umntu.
Enkosi, ndiyakulandela toe-to-toe kunye neeRoms, bendijonge i-Elite, kodwa ukuza kuthi ga ngoku bonke abo ubucebise ngeGalaxy yeyona ibindifanela.
Enkosi ngomhlobo wakho othembekileyo, enabafundi abanjengale inika ukonwaba kunye namandla okuqhubeka nokuzama iirom ezintsha, ukuba inyani ngumsebenzi hehehe!.
Enkosi kwakhona mhlobo.
Ukuba nabani na unengxaki ngekhamera, (i-FC Galeria) njengam, okanye ngesidlali sakwaGoogle (asizifundanga iingoma) khubaza isidlali, andazi nokuba sisiphene, okanye senzeka kum kuphela , Ndiyixele nje.
Oku kuhlala kwenzeka xa sikhulula ifowuni kwi-PC engagcini nje ukulayisha imemori khadi yangaphakathi nangaphandle, ihlala isonjululwa okanye inyusa ikhadi kwindawo yokugcina okanye ukucoca i-cache kwimenyu / kwizicelo
Kanye emveni kokuninzi. Enkosi
Ngesi sizathu i-Android yile nto iyiyo, ngenxa yoluntu olukhulu emva kwayo.
Molo ngokuhlwa, bahlobo raaa26 noFrancisco Ruiz ... ndinombuzo ngethemba ungandinceda kuba ndiwukhangele kuyo yonke indawo kwaye andifumananga sisombululo ... emva kokumisela i-apn yelizwe lam peru yenkampani ... ndikwazile ukuqhagamshela kwi-intanethi kodwa kuphela nge-2g. Kuqwalaselo, ukhetho lokudibanisa kuphela nge-2g lwenziwe lwasebenza… Ndifuna ukudibanisa nge-3g kodwa andikwazi… andithathi inethiwekhi ye-3g. uyayazi ukuba ungayilungisa njani ??? Ndiyabulela kwangoko. ngokubhekisele
Ndicinga ukuba kungenxa yemodem, faka enye ehamba kakuhle kwiqela kwindawo yakho.
Kwibhlog kukho isithuba sendlela yokutshintsha imodem.
Zama amandla kwimenyu * # * # 4636 # * # *
molo wokulandela umkhondo, ndibeke ikhowudi ondixelele yona kwaye imenyu iyavela ... okanye kufuneka ndenze ntoni? ... Ndiyaphambana, awazi, ndikhangele kuyo yonke indawo kwaye andifumani nto konke konke, ndiyenzile into uFrancisco andixelele ukuba ndiyenze kodwa sele ndizamile ukutshintsha iimodem kwaye akukho nto ihlala ifana, thatha nje inethiwekhi ye-2g, kufuneka kuqatshelwe ukuba iselfowuni yathengwa kwilizwe lam lasePeru…. ndicela undincede 🙁
Molo kwakhona kwakhona ... umntu uyayazi indlela yokulungisa ingxaki yam, ndingayivuyela kakhulu ukuba awudibanisi i-3g, sele nditshintshe iimodem ezi-3 kwaye akukho nto iyaqhubeka ... oku kuye kwandigxininisa kakhulu, ukusukela kwisantya se-intanethi se-2g icotha kakhulu, naziphi na iingcebiso ... ewe ukutshintsha i-rom kuya kusonjululwa ... ukuba kunjalo yintoni okanye asikho esinye isisombululo onaso ... ndivela ePeru, ndingavuya kakhulu. ngokubhekisele
Umhlobo, ngaba uyekile emva kokukhanyisa ixesha elifanelekileyo ndide ndifumane umqondiso? Uxolo, kodwa andisebenzisi i-3g, ndiza kuzama ukuyixela.
Molo raa26, ukuba ndishiya ixesha lobulumko lemizuzu emi-5 eyathi isifundo sathi, ndiyaphambana, ndiyathemba ukuba kukho isisombululo: S
Ewe, mhlobo wokuqala, sukuphambana. Mandiqonde ngcono iisetingi, kwaye ndiza kukunceda. Into endikucebisayo kukuba ujonge kumsebenzisi wakho. Musa nje ukukhankanya ukuba uyikhanyisile.
Ngaba uyazi ukuba le rom ayikalungisi umba wokuba xa uqhagamshela ifowuni kwi-pc nge-usb, ayiyiboni imemori khadi?.
ukulungiselela i-samguns galaxy s kwangaphambili ngaba olu hlaziyo luza kuphuma ???
Ndixelele imodeli ngqo, umzekelo iGPS S yiGT-I9000
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukubeka isikrini ngaphandle kokukroba umfanekiso? Nceda!!!
Zama i-Crop Wallpaper, ikuvumela ukhethe umfanekiso wonke ngaphandle kokunqanda.
Molo, molo mhlobo, ndivela eMexico kwisiXeko saseMexico kwaye ayithathi mqondiso we-telcel, sele ndizamile ngeemodem ezininzi kwaye akukho nto .. Ndenze ufakelo njengoko uthethile kwaye uvumele i-rom ihlale, andazi ukuba into efanayo iyenzeka emntwini okanye ukuba ungandinceda, enkosi aaa ngendlela malunga nedatha ye-3g, andikhathali, into endiyifunayo sisisombululo kukugubungela inethiwekhi ...
Phendula u Dragonnegro0
Kwenzeka into efanayo kum, iimodem ezifumanekayo kwibhlog zeze-ICS, ndiyazibuza ukuba ungazifumana phi ezi ziJB ????
Iimodem ezisetyenziswayo zezo ze-ICS, ndizamile i-JVU kwaye isebenza kakuhle nangona ndikhetha enye ye-rom
Inokuba yintoni ingxaki? kuba ndiqala ufakelo ukusuka kwi-JVU kwaye ukuya apho umqondiso ugqibelele kodwa ukufaka i-rom umqondiso awunto kwaphela kwaye ndizamile ngazo zonke iimodem ewe nazo zonke! Kwaye akukho namnye kubo onika ingxelo. Ndiyaphinda ndiyayigxininisa inkampani yam nguTelcel kwaye ndivela kwiSithili seFederal. Mex. Nceda uncede
UNathalie Vergara sitsho
Ndinengxaki efanayo, uyisombulule?
Phendula uNathalie Vergara
Ingxaki kungenxa yokuba i-rom iyitshintsha imodem iye kwi-KCF1, kwaye iqinisekile ayikusebenzeli, zama emva kokufaka i-rom, utshintshe imodem kwiJVU, akukhuselekanga ukusombulula ingxaki kodwa ungazama.
Kwibhlog unesithuba kunye nemodem yeJVU kunye nendlela yokutshintsha ukusuka ekubuyiseleni.
Sele ndiyenzile, ndacinga ngokufanayo kodwa nangoku hayi .. Ekupheleni kosuku iaroma yibeta mhlawumbi yingxaki yothando okanye ibingazukulinda uhlobo olulandelayo .. Ndisebenzisa Elite one kodwa ulwahlulo lwedatha lunika okuninzi haha ​​kunye nemvano-siphelo .. Ngapha koko, ukuba umntu ufumana isisombululo esipheleleyo, thumela apha kuba ayindim ndedwa onale ngxaki kwaye ndisaya kwenza okufanayo. Enkosi kwangaphambili kuye wonke umntu ophawulayo
Ewe, ndinayo i-rom ukusukela ngaphambi kokupapasha iposti kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kum, ndivela eSpain kunye nomsebenzisi weYoigo.
Kulungile ngesizathu esivakalayo ... Inethiwekhi ye-telcel ayihlali kwi-Mhz efanayo neye-yoigo, kodwa nangona kunjalo, kunqabile ukuba kungabikho modem eseleyo.Ayikho indlela yokulinda i-V7
IVAN DIAZ sitsho
Molweni zihlobo andazi kwenzekeni kodwa ndigqibele ndinophawu kule rom ... ndenze njani? Ndiza kuchaza .. kwabo bahlala eMexico njengam nabalawula inethiwekhi yeTelcel .. Ndiqale kwi-JVU rom ndaza ukusuka apho ndaya kwi-BETA 4 ye-ELITEMOVIL ... emva koko ndayisebenzisa okwethutyana ndahamba ukuya kwi-BETA 5 ye-ELITEMOVIL ndisula yonke into kodwa andiyithandi kuba isandi sesandisi-lizwi nesithethi singxola kakhulu emnxebeni kwaye kuba ndisoyika ukutshisa okanye isithethi okanye i-earphone ndithathe isigqibo sokuba ndibeke umngcipheko ndiphinde ndibane I-TEAM ANDROID LA V6 yenza iisula kwaye ndafaka i-TAJB V6 kwaye ngoku ndilapha isiginali ibaluleke kakhulu kwaye yonke into isebenza kakuhle ubuncinci bendisoloko ndiyisebenzisa ngalo lonke ixesha iiyure ezingama-24 kwaye wonke umsebenzi ugqibelele ... mhlawumbi yinkathazo enkulu ukufakela kodwa ukuba umntu unengxaki Kulungile, ayibizi mali ukuyenza ... UKUCACISA AKUFAKI IMODE EYODWA Ndenze yonke into njengoko ndiyichaza ENKOSI NAKUBA KUKHONZE BANI, MAYIZI NdinguMsebenzisi we-Dragonnnegro0 ngena ngeakhawunti kaGoogle
Andikwazi ukudlala umculo kwi-sd yam yangaphandle ngomculo odlalayo, andizamanga omnye umdlali.
Kungcono ukuba ufake i-Android Music okanye iMiui Music
Ndincede ndibuze isitshixo esithi: chwetheza igama eligqithisiweyo ukuze uguqule ukugcinwa
Yinto engaqhelekanga ukuba ndingaphinda ndidanyaze kwakhona
Kunye nevumba? okanye ufake yonke into kwakhona?
ukwenza idatha yokusula / ukuseta kwakhona kwefektri »+« susa ukwahlula kwe-cache, kuyasebenza 😉
Andikwazi ukufaka olu hlaziyo ndifumana impazamo ithi akukho sithuba sishiyekileyo kwisixhobo. akukho sithuba kwisixhobo. kwaye sele ndiyifomathile imemori yangaphakathi yeseli yam. kwaye ndiqhubeka ndifumana impazamo. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kutheni?
Ndivela eVenezuela kwaye ndinothungelwano lwe-movistar. Ndizamile iimodem ezininzi kwaye ayisebenzi. Ngaba ukhona umntu owaziyo onokundinceda?
Kwenzeka into efanayo kum kodwa nge-digitel
Ewe ndinayo i-Samsung Galaxy i9000 kwaye ndinokususwa kwefektri kuba bendinezinto ezininzi kwimemori yam endifuna ukuyicima kodwa bendikwazi ukuyicima nganye nganye kwaye bendisisicima somzi-mveliso kwaye ngoku ifowuni ishiyeke ingenawo umqondiso Ndingayisombulula njani le ngxaki, enkosi
Zama ukukhanyisa i-JVU nge-odin, kwibhlog unesifundo sendlela yokwenza inyathelo ngenyathelo
Jonga ukuba unokhetho lokusebenzisa idatha yePakethi esebenzayo. Ukubamba iqhosha elicimileyo imizuzwana embalwa kuya kuzisa imenyu ukuze isebenze. Ukuba sele uyisebenzisile, mhlawumbi unamaNqaku ePoint Access (APN) angaqwalaselwanga. Khangela i-Intanethi ngamaxabiso womboneleli wakho wefowuni, ngokwelizwe lakho, kwaye ufake ezi xabiso. Ungahlela i-APN kuseto-> IiNethiwekhi eziSelfowuni-> Amagama endawo yokuFikelela-> APN eNtsha.
Molo, ngaba kukho umntu owaziyo ukuba kutheni xa ndidibanisa ifowuni yam ne-pc iqonda kuphela i-sd yangaphakathi hayi eyangaphandle? Ndiyathetha, andiyinyusi kwikhompyuter, ndiyinyusa kuphela ngaphakathi kunye ne-6 gb. Ndifuna ukongeza umculo kunye nokunye kweli khadi kwaye andinakuyenza ngale ndlela bendiqala ngayo.
Kwiposi ndiye ndabona ukuba i-sd yangaphandle ayikaziwa yi-pc.
Ndabelana ngolu lwazi malunga nokuvalwa ngenkani okanye impazamo yeapp ... Ndiqalile ukujonga kwaye kungenxa yokugcina imemori .. Khuphela iapk ebizwa ngokuba yi "App cache cleaner" emarikeni kwaye uya kubona ukuba isonjululwe nokuba iingoma sukufunda usetyenziso lomculo ndiyathemba ukuba iyakusebenzela
inyani i-superfluid, kodwa ine-drawback encinci andinakuyisebenzisa njengefowuni hee hee
Molweni zihlobo andazi kwenzekeni kodwa ndigqibele ndinophawu kule rom ... ndenze njani? Ndiza kuchaza .. kwabo bahlala eMexico njengam nabalawula inethiwekhi yeTelcel .. Ndiqale kwi-JVU rom ndaza ukusuka apho ndaya kwi-BETA 4 ye-ELITEMOVIL ... emva koko ndayisebenzisa okwethutyana ndahamba ukuya kwi-BETA 5 ye-ELITEMOVIL ndisula yonke into kodwa andiyithandi kuba isandi sefowuni kunye nesithethi singxola kakhulu emnxebeni kwaye kuba ndisoyika ukutshisa okanye isithethi okanye i-earphone ndithathe isigqibo sokuthatha umngcipheko ndikhanyise I-TEAM ANDROID LA V6 iphinde yenze ukusula kwaye ndafaka i-TAJB V6 kwaye ngoku ndilapha umqondiso ubalaseleyo kwaye yonke into isebenza kakuhle ubuncinci bendisoloko ndiyisebenzisa ngalo lonke ixesha iiyure ezingama-24 kwaye wonke umsebenzi ugqibelele ... mhlawumbi Yinkathazo enkulu ukufakela kodwa ukuba umntu uneengxaki Kulungile, ayibizi mali ukuyenza ... UKUCACISA AKUFAKI IMODE YODWA Ndenze yonke into njengoko ndiyichaza. ENKOSI NAKHO OSEBENZAYO IT, MAYAZI. NDINGU-USER Dragonnegro0 ngena ngeakhawunti kaGoogle
Phendula IVAN DIAZ
Into oyithethayo inokuba yinto eyenzeka ngengozi, ukuba wenza ufakelo olucocekileyo lwe-rom, oko kukuthi, ukufomatha yonke into ukusuka kwi-mounts kunye nokugcinwa, emva koko ukhanyise i-JVU kunye neCFRoot yayo, kwaye ekugqibeleni ukhanyise i-rom, usula kwakhona kwaye usuka kwii-mounts kwaye yokugcina ifomathi, i-cache, idatha, idatha kunye nenkqubo kufuneka zisebenze ngokufanayo ngaphandle kokwenza yonke into oyithethayo yiphenenon.
Kwenzeka into efanayo kum, ndisaphuma eMexico ngeTelcel. Ke kufuneka ndenze ntoni?
UManuel Arco sitsho
Ndiyayibona ngokuthe chatha nangakumbi ngamanye amaxesha kodwa ndinengxaki xa ndigcina i-APN, kwimeko yam movistar (eSpain) ushiya isakhelo ngokungathi bendisigcine ngokuchanekileyo kodwa uluhlu lwe-APN luhlala lungenanto, ngenxa yoko andinakho ukusebenzisa idatha .
Phendula uManuel Arco
xa uqala kwakhona uza kubona utshintsho olwenziwe
Ngapha koko ... akukho ndlela, icinyiwe amaxesha ambalwa kwaye akukho nto, uluhlu lwee-APN luselungenanto ... lihlazo kum kuba lalikhangeleka lihle kakhulu, lalisiya likhawuleza kwaye linamanzi.
Kwenzeka into efanayo nakum. Akukho ndlela.
Kwimeko yam yiPepephone
Andizigcinanga nazo, kodwa zithatha ngokuzenzekelayo. Into ekufuneka uyenzile ukuyivula kukuyibeka kwimowudi yendiza kwaye uphume, isebenza ngokugqibeleleyo kum, xa ndiphuma kwimowudi yokubhabha, ii-apn ezi-3 zenziwe zasebenza ngokuzenzekelayo.
uwusombulule umba we phone?
Molweni nonke. Ndifuna ukucothula i-I9000 yam ukuze ndikwazi ukugcina i-EFS kwaye ndiqale ukubeka ezinye iROM kuyo kodwa ngenguqulelo endinayo andifumani ndlela yokuyisusa.
Idatha yeselfowuni yile:
I-Samsung Galaxy S GT-I9000
Inguqulelo yeFirmware: 2.3.6
Inguqulelo ye-baseband: I9000BUJV5
Inguqulelo yeKernel: 2.6.35.7-I9000BUJVI-CL1076478dpi@DELL172 # 2
Yakha inombolo: GINGERBREAD.BUJVI
Enkosi kwangaphambili kwaye sivuyisana nayo yonke into enisifundisa yona kule bhlog.
Ukubetha ngentlahla sitsho
Kwikhonkco le-XDA endilubeke apha ngezantsi kukho uluhlu lweenkozo ukujikeleza iiROM ezahlukeneyo zeGT-I9000.
Khangela inombolo yeposi # 9 kwiChafirefire kwaye kukho enye ebizwa
Ndicinga ukuba yeyakho nangona ndingatsho ngokuqinisekileyo. Nguye kuphela ovela kwiJingerbread JVI.
Qinisekisa kakuhle kwaye ngethemba lokuba iya kukunceda.
Ukujikeleza kulula. uvula i-Odin kwaye ngaphandle kokutshekisha iPIT okanye ISAHLUKO uyibeka kwibhokisi ethi PDA.
Ubeka iselfowuni kwimowudi yokukhuphela kwaye xa inkqubo ikuqonda, iselfowuni inika UKUQALA kwaye xa igqibile, iselfowuni iyaziphinda kwaye sele ijikelezwe.
Ungaphendula ngokuthi ulwazi olucelileyo lukunikile na.
Sinikwe kakhulu ukucela isandla kodwa emva koko asinako nokutsho ukuba uncedo luye lwanceda kwaye kuncinci ukuthi enkosi, akunjalo?
Ndine-i9000b esetyenziselwe le kwaye zithini iimpazamo zerom
Molweni, okokuqala ndifuna ukubulisa abantu basekuhlaleni, ndimtsha kwiforum kwaye andiqondi okuninzi kwezi zinto, mhlawumbi omnye wenu angandinika impendulo ecacileyo.
Ndinesiphelo se-Samsung Galaxy GT i9000T, ndiyithenge kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ndonelisekile ngesixhobo, nangona kunjalo ndingathanda ukwazi ukuba ndingayihlaziya na kwinguqulelo yamva nje ye-android enje nge-4.0 ICS okanye le nguqulo 4.1 abayithumeleyo.
Ndishiya idatha yesiphelo sendlela:
Inombolo yomzekelo: GT-I9000T
Inguqulelo yeFirmware: 2.3.3
Inguqulelo ye-baseband: I9000TUBJV6
Inguqulelo yeKernel: 2.6.35.7-I9000TUBJV6-CL189219 se.infra@SEP-42 # 2
Yakha inombolo: GINGERBREAD.UBJV6
Sele ndinombulelo kakhulu
Ayiyiqapheli iSim Card yam. Ndingenza ntoni? Eminye isebenza ngokugqibeleleyo. Ukusuka eMexico. Ukubulisa.
UAxel Jara Mujica sitsho
Ngaba iya kusebenza kwi-Galaxy S Advance?
Phendula kwiAxel Jara Mujica
Nge-13/08/2012 ngo-08: 14, «Disqus» wabhala:
URexodor Yasmany Zapata Perez sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba iyasebenza nakwiSamsun Galaxy SL I9003.
Phendula Rexodor Yasmany Zapata Perez
Izolo 26/08/2012 Ndizamile ukufaka i-TAJB v6 ROM kunye nokulungisa, ukukhuphela iifayile kwesi sithuba sinye, kodwa ezi fayile zibonise iwebhu ukuba azisafumaneki, ndiye ndazikhangela ngaphandle ndazifumana. Kwiwebhusayithi yeJelly Bean bekukho uguqulelo 7.1 kwaye ndikhuphele loo ROM. Ukulandela amanyathelo kwileta, kodwa ngohlobo 7.1. endaweni ye-6, isiphelo sam se-GT-I9000 senza kakuhle, ngaphandle kokuba ndine-generic IMEI, endaweni ye-IMEI yesiphelo sam. Ndenze ikopi yefolda eyaziwayo ye-EFS kwaye ndiza kuyibuyisela ngoku, jonga ukuba ihamba njani.
Ndinengxaki, ukubona ukuba ungandinceda na, ngalo lonke ixesha ndifaka i-rom kwi-galxy s I9000 yam (ndiyenza ngofakelo olucocekileyo) ngesiseko se-Android 4.1. Yonke into ilungile ngaphandle kwaxa ndisiya kwindlu yam yelizwe, apho ndilahlekelwa ngumqondiso, nangona kunjalo, ukuba i-ROM isekwe kwi-ICS okanye isezantsi andilahlekanga ngumqondiso, (ukugquma ndithetha) Inokuba yintoni le nto? yenzeka kum nazo zonke iinguqulelo. Ndiyabulela kwangoko
Ukuphuhliswa kwale ROM kuyekisiwe
Zama ukutshintsha irediyo okanye imodem
Nge-05/09/2012 ngo-12: 45, «Disqus» wabhala:
UPaco Montero sitsho
Bhala uluvo lwakho. kodwa uyenza njani loo nto, mandikucacisele, ungabeka irediyo okanye imodem ukusuka kwisonka sejinja ukuya kwirom eqhuba ijeli yebhontshisi? Enkosi kwangaphambili kwaye ndicela undincede iqabane lam.
Phendula kuPaco Montero
Kukho iposti ebhaliweyo kwibhlog malunga nokuba iiradiyo zitshintsha njani kwii-roms ze-ICS kwaye ziyasebenza kwesi siseko sinye
Nge-05/09/2012 ngo-17: 00, «Disqus» wabhala:
Chano Chano Contreras sitsho
Molo, uyazi ukuba ndine-SAMSUNG GALAXY S GT-I9000B… NGABA I-JELLY BEAN izakuhlaziya isixhobo? Ndivela eArgentina.
Phendula uChano Chano Contreras
Le ROM inokusetyenziswa kuhlobo lwe-I900B olubandakanya iTV yedijithali
Andiyifumani i-zip superusu ndifumana kuphela i-rom endinayo inguqulelo ye-2.3.6 ndiyenzile ngale forum kodwa andazi ukuba ndingayidlulisela njani kule intsha, andifumani superuser fix zip. ..
molo, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ungayikhuphela phi i-rom ?? kuba ayifumaneki ndawo kwaye ezi linki azisebenzi. Enkosi
Le rom sele iphelelwe lixesha, kufanele ukuba ikhuphele eyona nto ibalaseleyo namhlanje, iTsunami X2.5 1ue ilapha kwibhlog
Molo, mva kwemini elungileyo, mfondini uFrancisco, uya kuba nayo ikhonkco yokukhuphela i-rom entsha yegalaxy s gt-i9000?
Ngaba umntu unokundixelela ukuba ndingayikhuphela phi le rom intle? Enkosi!
Isicatshulwa seAccessustantante A. sitsho
Umbuzo, emva kokutshintsha i-firmware ingaba unomathotholo kunye nomabonakude uyasebenza?
Phendula kuJuancbustamante A
Isebenza kwi-S +?
Akukho mhlobo we-S GT-I9000 kuphela
UJhon Almeida sitsho
isebenza kwi-SAMSUNG GALAXY S ADVANCE GT-I9070… ?????
Phendula Jhon Almeida
IMELQUISEDEC TORRES sitsho
Phendula MELQUISEDEC TORRES
UAlexandra Urrutia Zegarra sitsho
Molo ndifake i-JB kwaye ngoku ndilahlekelwe yi-IME yam nasiphi na isisombululo?
Phendula u-Alexandra Urrutia Zegarra